Tsangan-tononkalo ::Tonga eto an-drenivohitra ny fiantsana arahina kanto hafa • AoRaha
Tsangan-tononkalo Tonga eto an-drenivohitra ny fiantsana arahina kanto hafa
Avy nitety tanàna maro. Anjaran’Antananarivo indray no mandray ny tsangan-tononkalo mitondra ny lohateny hoe: “Hitady azy “S” 3.0” hiarahana amin’ny Faribolana Sandratra. Hotontosaina etsy amin’ny Fjkm Ambohimiadana Kristy Fitiavana, amin’ny alahady 4 aogositra izao ny lanonana.
Hanakoako, mandritra izany, ny sanganasan-dry Liantsoa, Vatoary, Kalo Fanomezana ary Narilala. Hampiavaka ny “Hitady azy “S” 3.0” ny filalaovana zavakanto maro ankoatra ny soratra, toy ny dihy, sary hosodoko…
Fehezanteny entina hanabeazana ireo karazana sehatra hiveloman’ny olona eo amin’ny fiainany andavanandro, mifamatotra amin’ny fitadiavam-bola ny “Hitady azy ”. Efa nentin’ny Faribolana Sandratra tany Antsirabe izy ity ary natao hoe: “Hitady azy B” ny lohahevitra tamin’izay. Avy eo, nentina tany Tsiroanomandidy ary nantsoina hoe: “Hitady azy D”.
Ankehitriny, ho tonga eto Iarivo indray ka natao hoe “Hitady azy S”. Mifono hevitra maro io “S” io, toy ny hoe “spécial”, amin’ny maha seho tokana azy. Azo atao koa hoe “seho” na “sary”, araka ny fanazavan’i Kalo Fanomezana hatrany.
Tsangan-tononkalo ::Tonga eto an-drenivohitra ny fiantsana arahina kanto hafa - ewa.mg dit :
[…] Tsangan-tononkalo ::Tonga eto an-drenivohitra ny fiantsana arahina kanto hafa est apparu en premier sur […]
Fizahantany :: Antsoina hankafy ny kolontsainy ao anatin’ny « Dian-tanana » ny rehetra
Andro iray, kanto iray :: Tandindonim-paharinganana ireo zava-maneno nampiavaka ny Malagasy